UNGAZIVIMBA NJANI OKANYE UZIVULE NJANI IINKQUBO KWIWINDOWS DEFENDER FIREWALL - ITHAMBILE
Ungazivimba njani okanye uzivule njani iiNkqubo kwiWindows Defender Firewall
Iposwe kwiIgqityelwe ukuvuselelwa: nge-16 kaJuni ngo-2021
IWindows Firewall sisicelo esisebenza njengesihluzi sePC yakho. Ihlola ulwazi olukwiwebhusayithi oluza kwinkqubo yakho kwaye inokuthi ithintele iinkcukacha ezinobungozi ezingeniswa kuyo. Ngamanye amaxesha unokufumana ezinye iinkqubo ezingayi kulayishwa kwaye ekugqibeleni ufumanise ukuba inkqubo ivaliwe nguFirewall. Ngokufanayo, unokufumana iinkqubo ezikrokrelayo kwisixhobo sakho kwaye unexhala lokuba zinokubangela ukwenzakala kwisixhobo, kwiimeko ezinjalo, kuyacetyiswa ukuba uthintele iinkqubo kwiWindows Defender Firewall. Ukuba awuyazi ukuba uyenza njani na, nasi isikhokelo indlela yokubhloka okanye ukuvula iinkqubo kwiWindows Defender Firewall .
Isebenza njani iFirewall?
Uyivumela njani inkqubo ngeWindows Defender Firewall
I-Apps ezimhlophe okanye iiNkqubo ezineWindows Firewall
Uzithintela njani zonke iiNkqubo ezingenayo kwiWindows Firewall
Uyivala njani iNkqubo kwiWindows Firewall
Kukho iintlobo ezintathu ezisisiseko zomlilo ezisetyenziswa yinkampani nganye ukugcina ukhuseleko lwedatha. Okokuqala, basebenzisa oku ukugcina izixhobo zabo kwizinto eziyingozi zenethiwekhi.
1. Izihluzi zepakethi: Izihluzi zepakethi zihlalutya iipakethi ezingenayo neziphumayo kwaye zilawula ukufikelela kwazo kwi-intanethi ngokufanelekileyo. Inokuthi ivumele okanye ivimbele ipakethe ngokuthelekisa iipropati zayo kunye neendlela ezichazwe kwangaphambili njengeedilesi ze-IP, iinombolo ze-port, njl. Ifaneleka kakhulu kwiinethiwekhi ezincinci apho yonke inkqubo ingena phantsi kwendlela yokucoca ipakethe. Kodwa, xa inethiwekhi ibanzi, ngoko obu buchule buba nzima. Kufuneka kuqatshelwe ukuba le ndlela ye-firewall ayifanelekanga ukukhusela lonke uhlaselo. Ayinakujongana nemiba yomaleko wesicelo kunye nokuhlaselwa kwe-spoofing.
2. Uhlolo olusemthethweni: Uhlolo oluqinisekisiweyo lunqanda ulwakhiwo olomeleleyo lwe-firewall olunokuthi lusetyenziswe ukuphonononga imijelo yetrafikhi ngendlela yokugqibela. Olu hlobo lokhuseleko lomlilo lukwabizwa ngokuba yi-dynamic packet filtering. Ezi firewall ezikhawulezayo zihlalutya iiheader zepakethi kwaye zihlole imeko yepakethe, ngaloo ndlela zibonelela ngeenkonzo zeproxy ukugxotha i-traffic engagunyaziswanga. Ezi zikhuseleke ngakumbi kunezihluzo zepakethe kwaye ziqashwe kumaleko womnatha we imodeli ye-OSI .
3. IiFirewall zeSeva yoMmeli: Banikezela ngokhuseleko lwenethiwekhi olugqwesileyo ngokucoca imiyalezo kumaleko wesicelo.
Uya kufumana impendulo yokuthintela kunye nokuvula iinkqubo xa usazi ngendima yeWindows Defender Firewall. Inokuthintela ezinye iinkqubo ekubeni ziqhagamshelwe kwi-Intanethi. Nangona kunjalo, ayiyi kuvumela ukufikelela kwinethiwekhi ukuba inkqubo ibonakala ngathi iyakrokra okanye ingekho mfuneko.
Usetyenziso olusandula ukuhlohliswa luza kubangela isilumkiso esikubuza ukuba ingaba isicelo siziswe ngaphandle kweWindows Firewall okanye hayi.
Ukuba ucofa Ewe , emva koko usetyenziso olufakiweyo luphantsi kokungaphandle kwiWindows Firewall. Ukuba ucofa Suku , ngoko nanini na isixokelelwano sakho sijonga umxholo okrokrisayo kwi-Intanethi, iWindows Firewall ivala usetyenziso ekuqhagameni kwi-Intanethi.
1. Chwetheza i-firewall kwiMenu yokukhangela uze ucofe ku Windows Defender Firewall .
2. Cofa kwi Vumela usetyenziso okanye uphawu ngeWindows Defender Firewall ukusuka kwimenyu yesandla sasekhohlo.
3. Ngoku, cofa kwi Guqula useto iqhosha.
4. Ungasebenzisa Vumela enye i-app… iqhosha ukukhangela inkqubo yakho ukuba isicelo sakho osifunayo okanye inkqubo ayikho kuluhlu.
5. Wakuba ukhethe usetyenziso olufunekayo, qiniseka ukuba ujonga phantsi Yabucala kwaye Uluntu .
6. Ekugqibeleni, cofa KULUNGILE.
Kulula ukuvumela inkqubo okanye uphawu kunokuthintela usetyenziso okanye inxalenye yeWindows Firewall. Ukuba uyazibuza uyivumela njani okanye uyivale njani inkqubo Windows 10 Firewall , ukulandela la manyathelo kuya kukunceda wenze okufanayo.
1. Cofa Qala , uhlobo i-firewall kwibar yokukhangela, kwaye ukhethe Windows Firewall kwiziphumo zophendlo.
2. Khangela uye ku Vumela inkqubo okanye inqaku ngeWindows Firewall (okanye, ukuba usebenzisa Windows 10, cofa Vumela usetyenziso okanye uphawu ngeWindows Firewall ).
3. Ngoku, cofa kwi Guqula useto iqhosha kunye phawula/ukhuphe uphawu Iibhokisi ezisecaleni kwesicelo okanye igama lenkqubo.
Ukuba ufuna ukufikelela kwi-Intanethi kwikhaya lakho okanye kwindawo yeshishini, jonga uphawu Yabucala ikholam. Ukuba unqwenela ukufikelela kwi-Intanethi kwindawo kawonke-wonke njengehotele okanye ivenkile yekofu, jonga uphawu Uluntu ikholamu ukuyidibanisa ngenethiwekhi ye-hotspot okanye uqhagamshelo lwe-Wi-Fi.
Ukuvala zonke iinkqubo ezingenayo yeyona ndlela ikhuselekileyo ukuba ujongana nolwazi olukhuselwe kakhulu okanye umsebenzi weshishini lokuthengiselana. Kwezi meko, kuyakhethwa ukuvala zonke iinkqubo ezingenayo ezingena kwikhompyuter yakho. Oku kuquka iinkqubo ezivumelekileyo kweyakho Uluhlu olumhlophe yoqhagamshelwano. Ke ngoko, ukufunda indlela yokuthintela inkqubo yomlilo kuya kunceda wonke umntu agcine ingqibelelo yakhe yedatha kunye nokhuseleko lwedatha.
1. Cofa i-Windows Key + S ukuzisa uphendlo uze uchwetheze i-firewall kwibar yokukhangela, kwaye ukhethe Windows Firewall kwiziphumo zophendlo.
2. Ngoku yiya ku Lungiselela imimiselo .
3. Ngaphantsi Inethiwekhi yoluntu useto, khetha Vala lonke uqhagamshelo olungenayo, kuquka nezo zikuluhlu lweenkqubo ezivunyelweyo , ngoko Kulungile .
Nje ukuba yenziwe, eli nqaku lisakuvumela ukuba uthumele kwaye ufumane i-imeyile, kwaye ungakhangela kwi-Intanethi, kodwa olunye uqhagamshelo luya kuvalwa ngokuzenzekelayo ludonga lomlilo.
Kwakhona Funda: Lungisa iingxaki zeWindows Firewall ngaphakathi Windows 10
Ngoku makhe sibone eyona ndlela ilungileyo yokuvala usetyenziso ekusebenziseni inethiwekhi usebenzisa iWindows Firewall. Nangona ufuna ukuba izicelo zakho zibe nokungenwa simahla kwinethiwekhi, kukho iimeko ezahlukeneyo apho unokunqwenela ukugcina isicelo singenakufikelela kwinethiwekhi. Makhe siphande indlela yokuthintela usetyenziso ekufikeni kwinethiwekhi yendawo kunye ne-Intanethi. Eli nqaku libonisa indlela yokuvala inkqubo kwi-firewall:
Amanyathelo okuBhloka iNkqubo kwiWindows Defender Firewall
2. Cofa kwi Iisetingi ezikwinqanaba eliphezulu ukusuka kwimenyu yasekhohlo.
3. Ekhohlo lephaneli yokukhangela, cofa kwi Imithetho ephuma ngaphandle ukhetho.
4. Ngoku kwimenyu ekude ekunene, cofa ku uMthetho omtsha phantsi kweZenzo.
5. Kwi IWizard yoMthetho oPhumayo omtsha , qaphela i Inkqubo yenziwe, cinezela i Okulandelayo iqhosha.
6. Okulandelayo kwiscreen seNkqubo, khetha i Le ndlela yenkqubo ukhetho, emva koko nqakraza kwi Khangela iqhosha kwaye ukhangele kwindlela yodweliso lwenkqubo ofuna ukuyivala.
Phawula: Kulo mzekelo, siza kuvala iFirefox ekungeneni kwi-Intanethi. Unokukhetha nayiphi na inkqubo onqwenela ukuyivala.
7. Emva kokuba uqinisekile malunga nendlela yefayile emva kokwenza utshintsho olukhankanywe ngasentla, unganqakraza ekugqibeleni i Okulandelayo iqhosha.
8. Isenzo isikrini siya kuboniswa. Cofa apha Vala umdibaniso kwaye uqhubeke ngokucofa Okulandelayo .
9. Imithetho emininzi iya kuboniswa kwiProfayili yesikrini, kwaye kufuneka ukhethe imigaqo esebenzayo. Iinketho ezintathu zichazwe ngezantsi:
Ummandla: Xa ikhomputha yakho iqhagamshelwe kwi-domain yenkampani, lo mgaqo uyasebenza.
Yabucala: Xa ikhomputha yakho iqhagamshelwe kuyo nayiphi na inethiwekhi yabucala ekhaya okanye kuyo nayiphi na imeko yeshishini, lo mgaqo uyasebenza.
Uluntu: Xa ikhomputha yakho iqhagamshelwe kuyo nayiphi na inethiwekhi yoluntu kwihotele okanye kuyo nayiphi na imeko yoluntu, lo mgaqo uyasebenza.
Umzekelo, xa uqhagamshelwe kwinethiwekhi kwivenkile yekofu (indawo kawonke-wonke), kufuneka ujonge ukhetho loLuntu. Xa uqhagamshelwe kuthungelwano kwikhaya/kwindawo yeshishini (indawo yabucala), kufuneka ujonge ukhetho lwaBucala. Xa ungaqinisekanga ngenethiwekhi oyisebenzisayo, Khangela zonke iibhokisi, oku kuya kuvala isicelo ekubeni sidityaniswe kuzo zonke iinethiwekhi ; emva kokukhetha inethiwekhi oyifunayo, cofa Okulandelayo.
10. Okokugqibela kodwa okungakuncinananga, nika igama kumgaqo wakho. Sicebisa ukuba usebenzise igama elikhethekileyo ukuze ube nokulikhumbula kamva. Nje ukuba yenziwe, cofa iqhosha Gqiba iqhosha.
Uya kubona ukuba umgaqo omtsha wongezwa phezulu Imithetho ephuma ngaphandle . Ukuba inkuthazo yakho ephambili kukuvalela ngengubo, ke inkqubo iphela apha. Ukuba ufuna ukucokisa umgaqo owuphuhlileyo, nqakraza kabini kwingeniso kwaye wenze uhlengahlengiso olufunekayo.
Uyithintela njani nayiphi na iWebhusayithi kwikhompyuter yakho, ifowuni, okanye iNethiwekhi
Lungisa Ayikwazanga Ukuvula iWindows Defender Firewall
Windows 10 Ingcebiso: Uluvala njani uFikelelo lwe-Intanethi
Lungisa Amaqela eMicrosoft aQhuba eQalisa kwakhona
Siyathemba ukuba esi sikhokelo sibe luncedo kwaye ukwazile vala okanye uvule iinkqubo kwiWindows Defender Firewall . Ukuba unayo nayiphi na imibuzo / amagqabantshintshi malunga neli nqaku, zive ukhululekile ukuwabeka kwicandelo lamagqabaza.
U-Elon ungumbhali wezobugcisa kwi-Cyber ​​S. Ubhala indlela-izikhokelo malunga neminyaka eyi-6 ngoku kwaye uye wagubungela izihloko ezininzi. Uyakuthanda ukugubungela izihloko ezinxulumene neWindows, Android, kunye namaqhinga amva nje kunye neengcebiso.